AmaMandla kunye neMiphumo yezoPolitiko zamaKhontsi
Okokuqala kwaye mhlawumbi ebaluleke kakhulu into esifanele siyikhumbule kukuba, xa kuthethwa konke kwaye kwenziwa, kwindlela yezopolitiko kunye nempi yezobuKhuselo zaziyi-failure enkulu. I-Crusade yokuqala yaphumelela ngokwaneleyo ukuba iinkokeli zaseYurophu zaziyokwazi ukukhupha izikumkani eziquka izixeko ezinjengeYerusalem, i-Acre, iBhetelehem, ne-Antiyokwe. Emva koko, nangona kunjalo, yonke into yenyuka.
Ubukumkani baseYerusalem buya kuhlala ngenye indlela okanye enye iminyaka emininzi iminyaka, kodwa bekuhlala kusesikweni.
Kwakusekelwe kumda omude, omncinci womhlaba ongenalo izithintelo zemvelo kunye nabemi bawo abazange banqobe ngokupheleleyo. Ukuqinisekiswa okuqhubekayo okuvela eYurophu kwakudingeka kodwa akusoloko kuvela (kwaye abo bazama abazange bahlale behlala bebona iYerusalem).
Bonke abemi bayo babe malunga nama-250,000 kwizixeko ezinxweme njengeAscalon, Jaffa , Haifa, Tripoli, eBeirut, eTire naseArere. Laba baqhankqalazi babenabantu abangaphantsi ko-5 ukuya ku-1-bavunyelwe ukuzilawula ngokwabo, kwaye banelisekile ngabaphathi babo abangamaKristu, kodwa abazange banqotshwe, banqotshwa.
Isikhundla semikhosi yama-Crusaders sasigcinwa ngokubanzi kwinethiwekhi eyinkimbinkimbi yeenqaba eziqinileyo kunye neenqaba. Kuyo yonke inxweme, abaKhuseli be-Crusaders babenenkqantosi phambi komnye, ngaloo ndlela bavumela ukukhulumisana ngokukhawuleza kwimimandla emikhulu kunye nokuvuselela imikhosi ngokukhawuleza.
Ngokunyanisekileyo, abantu babethanda ingcamango yamaKristu abusa uMhlaba oyiNgcwele, kodwa abazange banomdla wokuhamba ukukhusela . Inani lamakhondla kunye nabalawuli abazimisele ukuchitha igazi nemali ekukhuseleni iYerusalem okanye i-Antiyokwe yayincinci kakhulu, ngokubhekiselele ekubeni iYurophu yayingeke ihlangane.
Wonke umntu wayehlala exhalabele ngabamelwane. Abo bashiye bafanele baxhalabe ukuba abamelwane babeza kudibana kwintsimi yabo ngelixa bengabikho ukusikhusela. Abo bahlala ngasemva babefanele bakhathazeke kukuba abo beMfazwe woKhuselo babezakukhula ngamandla kunye nodumo.
Enye yezinto eziye zanceda ukukhusela iiNtsholongwane ukuba ziphumelele kwakukho ukuphikisana okuqhubekayo nokuphazamiseka. Kwakukho, kunene, into eninzi phakathi kweenkokheli zamaSilamsi ngokunjalo, kodwa ekugqibeleni, ukwahlukana kwamaKristu aseYurophu kwakubi kakhulu kwaye kwabangele iingxaki xa kufikeleleke kwiiprojekthi zempi eziseMpumalanga. Nangona uEl Cid, iqhawe laseSpain leReonquista, njengamaxesha amaninzi awalwela abaholi bamaSilamsi njengoko wayebenxamnye nabo.
Ngaphandle kokubuyiselwa kwe-peninsula yase-Iberia kunye nokubuya kwakhona kwezinye iinqithi kwiMeditera, kukho izinto ezimbini kuphela esinokuzikhomba ukuba zifanele ukuba yimpumelelo yempi okanye yezopolitiko zeMpikezelo. Okokuqala, ukubanjwa kukaConstantinople ngamaSilamli kwakusenokwenzeka ukuba kulibazisekile. Ngaphandle kokungenelela kweNtshona Yurophu, kungenzeka ukuba uConstantinople wayewa ngokukhawuleza ngaphezu kwe-1453 kunye neYurophu eyahlukileyo yayiza kusongelwa kakhulu. Ukugxotha emva kwe-Islam kunokunceda ukugcina iYurophu yaseYurophu.
Okwesibini, nangona ama-Crusaders ekugqibeleni anqatshulwa aze aqhutywe eYurophu, ama-Islam ayebuthathaka kwinkqubo. Oku akuncedanga nje ukulibazisa ukuthunjwa kweConstantinople kodwa kwanceda ukuba i-Islam ibe yinto elula kubaMongol abagibela eMpuma. AmaMongol ekugqibeleni aguqukela kwiSilamsi, kodwa ngaphambi kokuba oko kwenzeke bachitha umhlaba wamaSilamsi, kwaye oko kwakunceda nokukhusela iYurophu ngexesha elide.
Ukuthetha ngokwezenzo kwiiNkolo zamaKatolika zachaphazela umKristu kwimisebenzi yempi. Ngaphambi kokuba kubekho ulwaphulo oluqinileyo kumkhosi, ubuncinci phakathi kwamasonto, ekucingweni ukuba isigidimi sikaYesu sasinqabela imfazwe. Ingcamango yokuqala yabeka ukuchitha igazi empini kwaye yaboniswa nguSt. Martin ekhulwini lesine wathi "Ndiyindoda kaKristu. Andifanele ndilwe. "Ukuze umntu ahlale engcwele, ukubulawa emfazweni kwakunqatshelwe.
Imiba yashintsha ngandlela-thile ka- Augustine oye wahlakulela imfundiso "yemfazwe nje" waza wathi ukuba kwakunokwenzeka ukuba ngumKristu aze abulale abanye ekulwa. Iimfazwe zamaKatolika zatshintshile yonke into kwaye zenza umfanekiso omtsha wenkonzo yobuKristu: i-monk yemfazwe. Ngokusekelwe kwimodeli ye-Crusading orders njengezibhedlele kunye neTrans Templar , bobabini ubufundisi kunye nabafundisi banokujonga inkonzo yenkonzo kunye nokubulala abagxeki njengento evumelekileyo, ukuba ayilona ndlela ekhethekileyo yokukhonza uThixo neCawa. Lo mbono omtsha waboniswa nguSt. Bernard waseClairvaux owathi ukubulala egameni likaKrestu "kukufa" kunokubulala "okokuba ukubulala umhedeni kukuzuzisa uzuko, kuba luzukisa uKristu."
Ukukhula kwemikhosi, iinkolelo zonqulo ezifana neTeutonic Knights kunye neKnights Templar nazo zachaphazelekayo kwezopolitiko. Akuzange kubonwe ngaphambi kweMfazwe yamaKlase, abazange basinde ngokupheleleyo ekupheleni kweMfazwe yamaKatolika, nokuba.
Ubutyebi babo kunye nepropati, ngokuqhelekileyo yabakhuthaza ngokukratshi nokunyanzela abanye, babafaka iithagethi ezilingayo kubaphathi bezopolitiko abazange bahlupheke ngexesha leemfazwe kunye nabamelwane kunye nabangakholwayo. Iimifanekiso zaxhaswa kwaye zatshatyalaliswa. Ezinye iilayali zaba yimibutho yokuncedisa kwaye zalahlekelwa ngumsebenzi wazo wangaphambili wempi.
Kwakukho utshintsho kwimeko yemikhosi yonqulo. Ngenxa yoqhagamshelwano olwandisiweyo kunye neendawo ezininzi ezingcwele, ukubaluleka kweempahla zanda. AmaKarights, ababingeleli kunye nookumkani bahlala bebuyisa izibhambathiso kunye neengcambu zeengcwele kunye neziphambano kunye nabo kwaye bandise ubungqina babo ngokubeka ezo ziqwenga kunye nezicwangciso ezibalulekileyo kwiicawa. Ngokuqinisekileyo iinkokeli zecawa zendawo zazingacingi, kwaye zazikhuthaza abantu ukuba bahloniphe le mihla.
Amandla opapa anyuke kakhulu kwinxalenye ngenxa yeeNkqubela, ngokukodwa okokuqala. Kwakunqabile ukuba nayiphi na inkokheli yaseYurophu ihambe kwiNkqubela ngokwazo; ngokuqhelekileyo, iiNtsholongwane zazisungulwa kuphela ngenxa yokuba upapa wagxininisa kuyo. Xa bephumelele, udumo lwamapapa luphuculwe; xa behlulekile, izono zabalandeli beNkcazo zachithwa.
Ngezihlandlo, nangona kunjalo, kwakungenxa yeofisi kampapa ukuba izipholozo kunye nemivuzo yokomoya yahanjiswa kulabo bazinikele ukuthabatha uMnqamlezo kunye nokuya eYerusalem. Upapa wayedla ngokuqokelela irhafu ukuhlawula i-Crusades - iintlawulo ezithathwe ngqo kubantu kwaye kungekho nxaxheba okanye uncedo lwabaholi bezopolitiko zendawo. Ekugqibeleni, abapapa beza kuluqonda eli lungelo kwaye baqokelela irhafu kwezinye iinjongo, nto into ookumkani nabahloniphekileyo abazange bathande ngenxa yokuba yonke imali eyayiya eRoma yayiyimali eyayiye yalelwa ngenxa yamabhokisi abo.
I-cruzado yokugqibela okanye i-crusade yerhafu kwiDeorse yamaRoma Katolika yasePueblo, eColorado ayizange ichithwe ngokusemthethweni kude kube ngo-1945.
Ngelo xesha, nangona kunjalo, amandla kunye nodumo lwecawa ngokwawo lancipha. Njengoko kuboniswe ngasentla, iiNtshonkotha zazingehluleka kakhulu, kwaye kwakungenakukhunjulwa ukuba oku kungabonakalisa kakubi ubuKristu. Iimfazwe zamaKatolika zaqalisa ukuqhutywa yintliziyo, kodwa ekugqibeleni, zaqhutyelwa ngakumbi ngumnqweno wobukumkani ngabanye ukukhulisa amandla abo ngaphezu kwabo. Ukunyaniseka kunye nokungaqiniseki malunga necawa kwanda ngoxa ubuzwe buxhaswa phezu kweengcamango zeCawa yeZizwe zonke.
Kubaluleke nakwixabiso elongezelelweyo leempahla zorhweba - iYurophu yavelisa isantya esikhulu seendwangu, iziqholo, iigugu kunye nokunye okuvela kumaSulumane kunye namazwe angakumbi nakumaMpuma, njengamaNdiya kunye neTshayina , okwenza unomdla wokwandisa ukuhlola. Ngelo xesha, iimarike zavulwa kwiMpuma kwizinto zaseYurophu.
Oku kuye kwenzeka njalo kwiimfazwe emazweni akude kuba imfazwe ifundisa i-geography kwaye ikhulisa i-horizons enye-ngokucinga ukuba uhlala kuyo, kunjalo.
Amadoda amancinci athunyelwa ukulwa, baqhelana nenkcubeko yendawo, kwaye xa bebuyela ekhaya bafumanisa ukuba abafuni ukwenza ngaphandle kwezinye izinto ababezijwayele ukusebenzisa: ilayisi, i-apricot, i-lemons, i-scallions, i-satins , amagugu, idayi, kunye nokunye kwandiswa okanye yaba yindawo eqhelekileyo kuyo yonke iYurophu.
Kuyathakazelisa ukuba zininzi kangakanani utshintsho olukhuthazwa yimozulu kunye ne-geografi: ukushona okufutshane kwaye ngokukodwa ukufudumala okufudumeleyo kwakukho izizathu ezilungileyo zokubeka eceleni iingubo zabo zaseYurophu ngenxa yeengubo zendawo: ii-turbans, burnsoses, kunye ne-slippers ezithambileyo. Amadoda ayehlala emagqabini angaphantsi emanzini ngelixa abafazi babo beyifumene ne-perfume kunye nezimonyo. Abantu baseYurophu - okanye ubuncinci inzala yabo, batshata kunye nabahlali, bekhokelela utshintsho oluthile.
Ngelishwa kubaCriffers abahlala phantsi kummandla, konke oku kuqinisekisile ukukhutshwa kwawo onke macala.
Abahlali abazange bamkele ngokwenene, kungakhathaliseki ukuba bangaphi amasiko abo abawamkelayo. Babesoloko behlala, bangaze babe ngabemi. Ngelo xesha, abantu baseYurophu abavakatyelayo bahlambalaza ukunyamezela kwabo kunye nefuthe lezithethe zabo. Inzala yoKhuselo lokuqala yayilahlekelwe yinto ehlukeneyo yaseYurophu eyabenza abangaziwayo ePalestina naseYurophu.
Nangona iidolophu ezisemaphandleni abathengisi baseItali abanethemba lokubamba kwaye balawulwa ngokwenene ngexesha lonke belahlekile ekupheleni, izixeko zorhwebo zaseItaliya zagqitywa kunye nokulawula iMeditera, okwenza ulwandle lwamaKristu lusebenze ngorhwebo lweYurophu. Ngaphambi kweeNkqubela, ukuthengiswa kweempahla ezivela eMpuma kwakulawulwa ngamaYuda ngamaqela, kodwa ngokunyuka kweemfuno, inani elikhulayo labathengisi abangamaKristu lawaxoshe amaYuda ngaphandle - ngokuqhelekileyo ngemithetho ephazamisayo eyayinciphisa amandla abo okubandakanya nayiphi na yorhwebo kwindawo yokuqala. Amaxhoba amaninzi amaYuda kulo lonke elaseYurophu kunye neMhlaba oyiNgcwele ngabaPhuhli beMfazwe awanceda ekucaciseni indlela yabathengisi abangamaKristu abangena kuyo.
Njengoko imali nempahla zihamba, kunjalo abantu kunye neengcamango. Ukuqhagamshelana ngokubanzi namaSulumane kwakhokelela ekuthengiseni izinto ezincinci kwiingcamango: ifilosofi, inzululwazi, imathematika, imfundo kunye neyeza. Amakhulu amazwi ase-Arabhu ayetyenziswe kwiilwimi zaseYurophu, isiqhelo esidala samaRoma sokucheba iindevu esinye sabuyiswa, iindawo zokuhlambela zikarhulumente kunye nezitrato zaziswa, iilwimi zaseYurophu zaphuculiswa, kwaye kwakukho nefuthe kwiincwadi nakubongozi.
Ngaphezulu kweyona nto yayingumthombo waseYurophu, imibono amaSulumane ayeyilondolozile kumaGrike.
Eminye yayo yaba yinkqubela kamva yamaSulumane ngokwabo. Ngokubambisana, konke oku kwakhokelela ekuphuculweni kweentlalo kwiYurophu, kwaze kwabavumela ukuba badlulele impucuko yobuSilami - into eqhubekayo eya ku-Arabs ukuya kuloo mini.
Ukuxhaswa ngezimali kwi-Crusades kwakuyinto ebalulekileyo eyenza ukuphuhliswa kweebhanki, ishishini kunye nerhafu. Olu tshintsho kwerhafu kunye nezorhwebo lwanceda ngokukhawuleza ukupheliswa kobugcisa. Uluntu lwentlondi lwaluyanele ngokwenza izenzo zodwa, kodwa alufanelekanga ngokufanelekileyo kwimikhankaso emikhulu efuna inhlangano eninzi kunye nokuxhasa ngemali.
Abaninzi abahloniphekileyo babefanele bathengise amazwe abo kubaboleki, abathengisi kunye necawa-into eya kuba yabuya emva kwabo ukuze ibangele kwaye eyayiyekezela inkqubo ye-feudal.
Ngaphezu kweendwendwe ezimbalwa ezithatyathwa ngabantu abazithembekileyo ngeesifungo sobuhlwempu ngale ndlela zafumana izikhulu ezinobuncwane abacebileyo eYurophu.
Ngelo xesha, amashumi amawaka e-serfs anikezelwa inkululeko kuba bazinikela kwiiNkolo zamaKhontse. Enoba bafa kwinkqubo okanye bakwazi ukubuyela ekhaya bephila, babengaboshelwa kwilizwe elinabo abahloniphekileyo, ngaloo ndlela banqumla into encinane engenayo. Ababenokubuya babuya kuba neendawo zokulima ezikhuselekileyo bona kunye nookhokho babo babesoloko beyazi, abaninzi banokuphela kwiidolophu nakwizixeko, kwaye oku kwakhawuleza ukuhlala kwimizi yaseYurophu, ehambelana nokunyuka kweentengiso kunye ne-mercantilism.
Biography yaseRomeo Santos
Uluhlu oluphezulu lwabantu baseMexican Inventors
UbuKristu noDemokhrasi - Ngaba ubuKristu buhambelana neNtando yeninzi?
Indlela yokwenza i-Tris Buffer Isixazululo